Yintoni irekhodi lolwaphulo-mthetho? | Law & More BV
Blog » Yintoni irekhodi lolwaphulo-mthetho?
Ngaba uyaphule imithetho yekorona kwaye wohlwaywa? Ke kude kube kutshanje, uzibeka emngciphekweni wokuba nengxelo yolwaphulo-mthetho. Isohlwayo sekhorona siyaqhubeka nokubakho, kodwa akusekho nqaku kwirekhodi lolwaphulo-mthetho. Kutheni le nto iirekhodi zolwaphulo-mthetho zibe liva elinje kwiNdlu yabaMeli kwaye bakhethe ukuwuphelisa lo mlinganiso?
Ukuba wophula umthetho, unokufumana irekhodi lolwaphulo-mthetho. Ingxelo yolwaphulo-mthetho ikwabizwa ngokuba 'kukukhutshelwa kwamaxwebhu ezomthetho'. Luphononongo lwamatyala abhalisiweyo kwiNkqubo yoXwebhu lwezoMthetho. Umahluko phakathi kolwaphulo mthetho kunye namatyala kubalulekile apha. Ukuba wenze ulwaphulo-mthetho, oko kuya kuhlala kukwirekhodi lakho. Ukuba wenze ityala, oku kunokwenzeka, kodwa akusoloko kunjalo. Amatyala ngamatyala amancinci. Amatyala anokurekhodwa xa ohlwaywa ngesigwebo esingaphezulu kwe-100 yeerandi, ukugxothwa okanye isohlwayo esingaphezulu kwe-100 zeerandi. Isohlwayo saseCorona sizohlwayo esingaphaya kwe-EUR 100. Kude kube ngoku, kuye kwenziwa inqaku kumaxwebhu ezomthetho xa kumiselwa isohlwayo se-corona. NgoJulayi, inani lezohlwayo lalingaphezulu kwe-15 000. UMphathiswa u-Grapperhaus we-Ofisi yoMphathiswa Wezobulungisa Nokhuseleko wagxininisa koku, emva kokuba yena ngokwakhe efumene isohlwayo kwaye ke irekhodi lolwaphulo-mthetho ngokusilela ukuthobela imigaqo ye-corona kumtshato wakhe.
Iirekhodi zolwaphulo-mthetho zinokuba nefuthe elikhulu kuboni. Xa ufaka isicelo somsebenzi, maxa wambi kufakwa isicelo se-VOG (iSatifikethi sokuziphatha okuhle. Esi sisibhengezo esibonisa ukuba indlela oziphethe ngayo ayisiyo inkcaso yokwenza umsebenzi othile okanye isikhundla kuluntu. Ukurekhodwa kolwaphulo-mthetho kunokuthetha ukuba awuyifumani i-VOG. Kwimeko apho awusavumelekanga ukuba wenze ubugcisa obuthile, njengegqwetha, utitshala okanye umsindisi wesicelo. Ngamanye amaxesha imvume yokundwendwela okanye yokuhlala ingaliwa. Inkampani yeinshurensi inokukubuza ukuba unerekhodi lolwaphulo-mthetho xa ufaka isicelo seinshurensi. Kwimeko apho unyanzelekile ukuba uthethe inyani. Ngenxa yerekhodi lolwaphulo-mthetho usenokungayifumani i-inshurensi.
Ukufikelela kunye nokugcinwa kwedatha yolwaphulo-mthetho
Ngaba awazi ukuba unerekhodi lolwaphulo-mthetho? Ungafikelela kwirekhodi lakho lolwaphulo-mthetho ngokuthumela ileta okanye i-imeyile kwiNkonzo yoLwazi lwezoMthetho (Justid). IJustid yinxalenye yoMphathiswa Wezobulungisa Nokhuseleko. Ukuba awuvumelani nento ekwiirekhodi zolwaphulo-mthetho, unokufaka isicelo sokutshintsha. Oku kubizwa ngokuba sisicelo sokulungiswa. Esi sicelo kufuneka singeniswe kwiOfisi yangaphambili yeJustid. Uya kufumana isigqibo esibhaliweyo ngesicelo kwisithuba seeveki ezine. Amaxesha athile okugcina asebenza kwidatha yezomthetho yamatyala kwirekhodi yolwaphulo-mthetho. Umthetho umisela ukuba olu lwazi kufuneka luhlale ixesha elide kangakanani. La maxesha amafutshane kwizenzo zolwaphulo-mthetho kunakwizenzo zolwaphulo-mthetho. Kwimeko yesigqibo solwaphulo-mthetho, umzekelo kwimeko yesohlwayo se-corona, idatha iya kususwa kwiminyaka emi-5 emva kwentlawulo epheleleyo.
Ngenxa yokuba irekhodi lolwaphulo-mthetho lineziphumo eziphambili ezinjalo, kusengqiqweni ukunxibelelana negqwetha ngokukhawuleza ukuba, umzekelo, ufumene ikorona okanye wenze ityala. Kunokubakho, inene, kubekho ixesha elithile apho inkcaso kufuneka ingeniswe khona nomtshutshisi woluntu. Ngamanye amaxesha kunokubonakala kulula ukuhlawula isohlwayo okanye ukuthobela inkonzo yoluntu, umzekelo kwimeko yesigqibo solwaphulo-mthetho. Nangona kunjalo, kungcono ukuba imeko ihlolwe ligqwetha. Emva kwayo yonke loo nto, umtshutshisi woluntu unokwenza iimpazamo okanye enze ityala elingalunganga. Ukongeza, umtshutshisi woluntu okanye umgwebi ngamanye amaxesha unokuba nemfesane ngakumbi kunelo ebegwetyelwe isohlwayo okanye orekhodishe ityala. Igqwetha lingajonga ukuba ngaba isohlwayo eso sinelungelo na kwaye lingakuxelela ukuba sisigqibo esifanelekileyo sokubhena. Igqwetha lingabhala isaziso senkcaso lize lincedise ijaji xa kukho imfuneko.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nesihloko singasentla okanye ungathanda ukwazi ukuba singakwenzela ntoni? Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana namagqwetha Law & More ngolwazi oluthe kratya. Nokuba awuqinisekanga nokuba uyalidinga na igqwetha. Ingcali yethu kunye namagqwetha akhethekileyo kwicandelo lomthetho wolwaphulo-mthetho angakuvuyela ukukunceda.
Post edlulileyo Ukugxothwa
Post Next Yilwa noqhawulo mtshato